15 Chivabvu 2017
Chii icho ITIL?
Makomborero Kumakambani Emabhizimisi
Chikonzero nei ITIL Certification inokosha?
Inokurudzira Maitiro Akanakisisa Muzvikwata:
ITIL anozivikanwa Masangano anotsvakwa zvakajeka:
Nzira yekudzidziswa sei?
IT inoshandiswa imwe nguva inowanzoitika, iyo inoramba iri zvishoma inokosha pamusana pekuda kwekuti munhu anotarisira kukura. Kubudirira mumunda kunodzidziswa kwakadzidziswa chinhu chinokosha. ITIL ibasa rakagadziriswa reITSM kudzidza kwezvinokosha kune vashandi vari mumunda weT IT services uye IT kutarisira. ITIL Certification Training inobatsira pakuziva nheyo iyi inojekesa iyo inogadzirisa nzira yehupenyu hunouya.
Zvinogona kuoma zvakaoma kuti urambe uchizorodzwa asi hazvisi zvisizvo. Chiyero chakakura chebhizimisi iyi ndechekuti vashandi vari mumunda vanofanira kumira ikozvino kuti vazive mhizha. Mune mamiriro ezvinhu apo kuziva nzira dzinopedzisa mafaira kubva kune avo vanopfuurira kwechinguva chii chinoita kuti munhu ave akakurumbira ndeye chigadziro chekuramba ichizorodzwa nekuchinja kusingagumi. Kuwana dzidzo yehupfumi mumunda inozivikanwa kuti inzwisise. ITIL certification inobatsira mumwe kutora simba mumunda uye anokubatsira kuti ugare pamberi peboka.
Tsvakurudzo yakatsanangurirwa nezvekukosha nemigumisiro yeIITIL Kudzidziswa kunoitwa pasi pechido pasina mubvunzo inokupa chiratidzo chekuti chikwata ichi chinogona kuve nechinangwa chekuita.
Iko pfungwa yeIIT yakashamisika muGreat Britain pakati peC1980, kuti iite urongwa hwezviito zveTI kubatsira masangano ehurumende. Kubvira pakugadzirwa kwayo, parameter ye ITIL yakagamuchirwa, yakashandurwa uye yakatambanudzwa kuti iwane zviyero zvechangobva kuitika zvekugara nekugadzira denderedzwa yeT IT. Iyo yose yakakwana yatinayo nhasi ye ITIL inokwikwidzana kutarisira michina yeT IT kumasangano ese masimba.
Chinyorwa che Information Technology Infrastructure Library, ITIL inonyanya kushandisa kushandiswa kweT IT kuzadzisa zvinotarisirwa nebhizimisi. Iri urongwa hwekuita maitiro akajeka maererano neITSM (IT Service Management) uye inochengetedza mafomu, mazano, maitiro uye mabhuku ekuongorora asi zvisati zvisiri sangano-kunyanya asi zvinogona kusanganiswa nesangano chero ripi neripi pakusarudza mazano ehurongwa sangano. ITIL inopa danho kumasangano anobva kwaanogona kuronga, kuenzanisa nekugadzirisa kushandurwa kwekuvandudzwa.
Kuva iyo yakanyanyozivikanwa zvikuru yakagadziriswa sarudzo nhasi ITIL inoshandiswa nemasangano ekutarisira mabasa eTI. Inobatsira mutengi kuti awedzere kubatanidzwa nekugadzira kushandiswa kwemashoko anopa hurongwa hwekutarisana nebhizimisi dzavo. III hones inobatsira mumiganhu yepakati pezvikwata zvinogona kukura mukuvandudzika kwehutungamiri hweH IT kubva ikozvino rubatsiro mukuzadzisa huri nani hwehutano.
ITIL inobatsira bhizinesi zvinhu kuchinjwa kuva mamiriro ekushandura kwemari uye chikwata chemakethe chinogadzirisa nzira yekuvandudza hunovandudza hunobatsira kubudirira kwekutengeserana kwebhizimisi. Mamwe masangano anokwidziridzwa pasi rose seMicrosoft, IBM, akabatsirwa nekugadzirisa nekunyatsoita ITIL muhutano hwavo hweH IT.
Mutemo wakanaka pamusoro peIITIL unogona kubatsira vashandi vose kuti vawane migumisiro yakanakisisa ye sangano, kunzwisisa hukuru hwehumwechete, masangano mashomanana anowedzera kupa ruzivo rwekushandisa kwekushandisa hurongwa hwe ITIL uye mune vamwewo kutsigira vamiririri vavo ' ITIL certification mapoka ekuchinja.
Kudzidzisa ITIL kunogona kuitika shure kwekutora maitiro akapiwa pasi apa:
Nheyo yeChitatu yeIITIL - Sezvo zita rinokurudzira, iyi ndiyo nheyo inokosha yeIIT training. Kuva nheyo huru yeIIT certification iyo inopa vatsvaki vane ruzivo rwemashoko ezvinyorwa uye inopa urongwa hwehutano hunokosha hweItil mabheji. Icho chinosanganisira zvose zvakakosha nedhiyabhorosi kune vakadzidza avo vatsva kune pfungwa yeIYO.
ITIL Practitioner -Yakabatanidzwa mu2016, II IT Practitioner ndiyo chikamu chekupedzisira muIITIL certification. Kuburikidza neIlist Practitioner mukana wokufambisa mhepo unofanirwa kujekesa kushandiswa kwetsika ye ITIL kuitira kusimbisa zvinangwa zvebhizimisi. Iyi nheyo inotarisa mukudzidzira vatsva nehurongwa hwehutano hwekushandura, kupindirana, nekuenzanisa uye zviyero.
Chikamu chepakatikati ITIL - Munharaunda iyi yevadzidzi vanowana mukana wekutarisa pamusoro pemashanduri ekushandura emitambo ye ITIL system yakavimbika pane zvavanoda uye zvido zvavo. Nzvimbo mbiri dzemamodulesiti dzinoshandisa Service Lifecycle uye Service Capability. Kunyange zvazvo zvakapfuura zvinosanganisira kudzidza maitiro akasiyana-siyana makuru ekutarisa mafungiro akaonekwa neIITIL inozopa zvinhu zvisiri pachena zvehuwandu hwehuwandu hwemashoko.
ITIL Expert - Kuwedzera kune ruzivo rwakanga rwava ruzivo urwu urwu hunoshandisa maitiro eine mitsetse yakagadzirisa maminitsi eIIT structure nehurongwa.
ITIL Master - Iyi nhanho ndeyevaya vanoita basa vanofarira kufungidzira nekugadzirisa zvigadziriro. Nhamba yekupedzisira muItil kudzidzisa inoita zvinetso zvakasarudzwa mumunda uye inovapa chokwadi chekutarisana nekugadzirwa kwechokwadi.
Izvo neIlli Organisms ndeyekuti inobatsira sezvo inopa nzira yakasimba kune kuvimbika kwevatengi uye inowedzera kusimbisa kubudirira. Kuburikidza neIITI bhizinesi zvebhizimisi zvinogona kushandisa zvakanakira maitiro avo uye kusangana izvo zvinoramba zvichidzokorora mubasa rinotungamirirwa. Sezvo iwe uine ziso neziso pamwe chete nenharaunda dzisina simba yesangano rako, neI ITIL akadzidziswa akakodzera muhutungamiri unogona kuburitsa ivo vachishandisa mano avo uye unyanzvi. Chimwe chimwe chinhu kubva pane chimwe chinhu chakanaka ndechokuti ITIL inogadzirisa zviri nani uye zvakasimba ROI kana kudzoka kwekutsvaga mari. Nokuwanda kwenzvimbo yakadaro yekuisa pfungwa kumapuranga, masangano haazoregi kukwanisa kubvumirana neIIT master. Izvi zviitiko zvinoonekwa kune sangano zvakawedzera chido chevashandi veItil vane mazano.
Kuve iyo nyika yakagamuchirwa tsika yekuita iyo inoshandisa kushandiswa muTIT Services Management mumasangano akasiyana-siyana, kudzidziswa kweIlil kunopenya mubatidzi wekurwisana kwakanaka mumunda. Kuziva nezvekushanduka kwezvinhu zvitsva kunobatsira nguva dzose uye kunokupa nzvimbo yakakwirira kune vamwe. Sezvo iwe uchiziva maminitsi acho, mushure mekuwana ITIL chiziviso iwe unowedzera kukanganisa kwekusarudzwa kwehutano hunobudirira nenzira.
Zvinyorwa zvinofadza zveIITIL chiyeuchidzo
VAKAZI vane ITIL chiziviso varikuremekedzwa nemabhizimisi avo vakagamuchira chimiro cheIITIL. Kuchinja kwakashata, chero zvakadaro, ndiko kusununguka kwemabhizimisi maduku uye mashoma (SMB's) uye masangano kune vashandi vane ITIL certification. Mazuva ano SMB anoona nomwoyo wose kuongororwa kweIITIL yakagadziridzwa nekodzero nekuda kwezvinhu zvose zviri kufambira mberi zvekambani. Iko ikozvino yakava chikamu chebhizimusi chebhizimisi, uye SMB iri kuedza kunyanya kunyanya kubva pane iyo. Hapana sangano, guru kana zvishoma raizoda kutarisana nekuodzwa mwoyo asi nekuda kwezvikonzero zvebhajeti SMB ndeyemutsara hauna simba rekutarisana nekuodzwa mwoyo, kubva panguva ino mberi izvi zvakakosha zvikuru ITIL yakagadziridzwa inoziva.
ITIL chiziviso chakakosha kuti IT inotarisira vatungamiri, avo vanotarisana neTI vanobatsirwa nemashini zuva rega rega. Sezvo, chikamu chikuru chevatungamiri vehurumende vanoziva nezvenzira yekufambira mberi muI IT field, pakupedzisira vachiita kuti vafunge nezveIIT accreditations. Vangasafambira mberi kusvika pakuve ITIL nyanzvi asi kunyange ruzivo rwakakosha rwezvakadaro runogona kuvabatsira kuti vasavhiringidza nzira ye ITIL.
Kunze kwekuzivikanwa uye kunyanya kutsvaga mushure mekudzidzira chiziviso cheIITIL chinokonzera pasi pasi kubatsiro sekune iyo inotevera:
ITIL certification inowedzera maitiro ako eI. Izvo hazvingokubatsiri kuti urambe uchiziva nezvekuchinja zvikumbiro zvinowedzera kuzadzika kwakagadzirirwa kweTI inodzokorora. Sezvo ITIL yakarongeka urongwa hwezviito zvakaratidza kupararira kwavo kune dzimwe nzira, kuvandudza ruzivo rwezvakafanana kuchaita kuti vashandi vashande zvakaoma nekusangana kwezvakawanda uye zvinokurumidza kubudirira.
Munhu anonyatsozivikanwa naIITIL ndiye anoshanda zvakasimba sangano saka achiita kuti vakwanise kunyatsogona mubhidhiyo.
Nekukudziridza kuwanda kwekutengesa kweTIL mumasangano akakurumbira, chiziviso chinosvibisa muvakidzani uye chinovapa ruzivo rwokurumbidza mabasa akanaka mumusika. Mumwe muongorori anonzi ITIL ane kodzero yakakwirira pakugadzirisa pane zvisarudzo maererano nezvenhengo dzavo uye mabasa mumasangano.
ITIL ine chikwata ne ISO / IEC 20000 zviyero kubva zvino zvichireva kuti uwandu hwenyika hahuzokanganisi chero nguva ipi zvayo munguva yemberi iri mberi. Uyezve, pamwe nemamwe masangano e800 ari ISO / IEC 20000 akapupurirwa, ruzivo rweItIL dzakagadziriswa vadzidzisi rinoramba ruchiva rukuru. Vanomira kupisa kwakanaka pamusoro pevamwe nekuda kwekugona kwavo ruzivo rwehurukuro.
Imwe ITIL yakavimbiswa kana iripo inogonawo kusarudza kuisa njodzi pasi rose pasina kushandura purogiramu yebasa. Zvinopfuura masangano e10,000 pasi rose akagamuchira chimiro cheIITIL, achizosunungura mikana yehupenyu hunobatsira kunze kwenyika.
Chiziviso che ITIL chinogadzira matanho ekusimudzirwa mubhadharo uye kubudirira. Imwe yevashandi veTIL vane ruzivo rwemazuva ose inowanikwa muhomwe yepamusoro yekubhadhara uyezve inobata nzvimbo yakakosha muhofisi.
Ikudzidzisa kwakanaka uye kwakanyatsonaka kweIITIL inosvinudzwa kuburikidza nedzidzo dzakawanda dzepaIndaneti. Zvimwe pane zvidzidzo zvepaIndaneti zvinotungamirira kushandura kudzidzira uye mudzidzisi wekirasi yekirasi makirasi pamwe nekubatsira mukuvandudza ruzivo rweIITIL. ITIL kudzidziswa kunopiwa nehurumende dzakasimbiswa dzidziso yekusimbisa kuti vakatsvaga vakafuridzirwa nekutsvaga nezvimwe zvakafanana zvinotora dzidzo inofanirwa nekuda kwavo uye kufanirwa.
Zvichida kana zvisingasviki, mumwe munhu anonzi ITIL anozivikanwa haambogoni kutarisana nekusagona kwemazikana asingakwanisi kubva mukuramba achiwedzera kufarira kwechimiro ichi. Kutsigirwa muzvikwata zvakasiyana-siyana zvekudzidzisa kwaItil kunobatsira nyanzvi yehutungamiri hwakasiyana hweTI denderedzwa. Imwe nyanzvi inozivikanwa neIIL icharamba ichikwira zvishoma nezvishoma zvishoma nezvishoma.